के इजरायलमा नेतन्याहु युग समाप्त हुँदैछ?
नेपाल लाइभ शुक्रबार, असोज ३, २०७६, २०:१२
जेरुसेलम- स्थानीय सञ्चारमाध्यमले चुनाव आयोगको स्रोतलाई हवला दिँदै प्रकाशित गरेको चुनावी परिणाम अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको लिकुड पार्टीले १२० मध्ये ३२ सिट प्राप्त गरेको छ।
६ महिनाको अवधिमा भएको दोस्रो आम निर्वाचनमा यस्तो परिणाम आएको हो। उनको मुख्य विपक्षी दल ब्लू एन्ड ह्वाइट पार्टीको पनि उत्ति नै सिट प्राप्त भएको पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि पार्टीले स्पष्ट रुपमा बहुमत पाएको दाबी गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न।
दुवै पार्टीका नेता सम्पूर्ण परिणाम आउनुभन्दा अघि नै सहयोग पार्टीसँग परामर्शमा व्यस्त रहेका छन्। नेतन्याहुको नेतृत्वको दक्षिणपन्थी ब्लकको ५६ सिट प्राप्त हुने देखिएको छ। उनको विपक्षमा रहेको ब्लकको ५५ सिट हुने देखिन्छ। अन्य ९ सिट भने कुनै पनि ब्लकको सर्मथनमा रहेको देखिँदैन। सरकार गठनका लागि कम्तीमा ६१ सिट हुनुपर्नेछ। त्यसका लागि एक राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्ने सम्भावना मात्र प्रबल देखिएको छ।
विपक्षी नेता एविगडोर लीवरम्यान जो पहिले नेतन्याहुकै सरकारको विदेश र रक्षामन्त्री रहेका थिए, उनी यस निर्वाचनको परिणामले सत्ताको साँचो बोकेको व्यक्तिको रुपमा उदाएका छन्। उनको नेतृत्वमा रहेको इजरायल बेतेनु पार्टीले ९ सिट जित्ने देखिन्छ। यी अल्ट्रा–नेसनलिष्ट नेताले स्ष्पट पारेका छन् कि अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय एकताको सरकार हो।
अहिलेको निर्वाचन परिणामको अवस्था हेर्दा इजरायल बेतुन पार्टीको सर्मथनविना कुनै पनि सरकार गठन हुने सम्भावना छैन।
बुधबार राति १० बजे मतदान समाप्त भएपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै लीवरम्यानले देश राजनीतिक र आर्थिक दुवै रुपमा आपतकालीन स्थितिमा रहेको बताएका थिए। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको सरकार निर्माण हुनुपर्ने उनको राय थियो। यो राय हेर्दा उनले नेतन्याहुको विपक्षी सरकार निर्माण गर्ने संकेत गरेको बुझ्न सकिन्छ। किनकि आजभन्दा ठिक पाँच महिनाअघि लीवरम्यान नेतन्याहुको सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
जब नेतन्याहु एक सांसदले चुके
अप्रिल ९ को चुनावपछि इजरायल बेतुन पार्टीले प्रधानमन्त्रीको पदका लागि नेतन्याहुको नाम राष्ट्रपति रुवेन रिवलिनसँग सिफारिस गरेको थियो। तर सैन्य सेवाबाट अल्ट्रा–अर्थोडक्स (पुरातनवादी यहुदी) यहुदीको छुट दिनुपर्ने विषयमा विवाद भएको थियो। यो विवाद यति गहिरो भयो कि नेतन्याहु नेतृत्वमा बन्न लागेको दक्षिणपन्थी सरकारमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्ने अवस्था निर्माण भयो।
इजरायल बेतुनको सर्मथनविना नेतन्याहु ६१ सदस्य सांसद आफ्नो पक्षमा जुटाउन असफल भए। उनको पक्षमा ६० मत भयो तर एक मत कम प्राप्त भयो। जसका कारण उनले संसद भङ्ग गरे र पुन: आम निर्वाचनको घोषणा गरे।
इजरायलको इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो जब १६० दिनको अन्तरालमा दोस्रो पटक आम निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि आउन लागेको परिणामले धेरै संकेतहरु दिने देखिएको छ।
पहिलो रुपमा के इजरायलमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको युग समाप्त हुँदैछ? इजरायलको इतिहासमा सर्वाधिक समयसम्म प्रधानमन्त्रीको पद ओगट्न सफल भएका नेतन्याहु यो पटक नयाँ रेकर्ड बनाउँदै थिए। पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने उनको यो चाहना असफल हुन लागेको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्लटमा इजरायलको सदावहार प्रधानमन्त्री बनेको नेतन्याहु अब राजनीतिक प्लटमा पनि यसैगरी लोभ होलान् वा फेरि नयाँ यात्रा सुरु गर्लान् त भन्ने जिज्ञासा उठिरहेको छ। इजरालयको प्रधानमन्त्री पद पुन: प्राप्त गर्नका लागि नेतन्याहुलाई एक अर्को पार्टीको समर्थन हासिल हुन जरुरी छ। जो उनको दक्षिणपन्थी ब्लकमा सहभागी छैन।
हालसम्म सबै पार्टीले दक्षिणपन्थी ब्लकमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन् तर राजनीतिक कुनै पनि नयाँ सम्भावनाको भने अस्वीकार गर्न सक्दैन।
अर्कोतर्फ यदि राष्ट्रिय सरकार उनी विरुद्धको गठबन्धन बनेमा नेतन्याहुको राजनीतिक भविष्यमा के असर पर्ला त?
यस्तो परिस्थितिमा आम रुपमा दुवै पार्टीका नेताहरुले २/२ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने भागबन्डासमेत गर्न सक्दछन्। यो किन सम्भावना छ भने यस्तो अभ्यास यसअघि पनि इजरालयमा भइसकेको छ। तर यस्तो परिस्थितिमा नेतन्याहुका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आफ्नै सांसदलाई आफ्नो पकडमा राखिराख्न मुस्किल हुन सक्ने देखिन्छ।
नेतन्याहुको विरुद्धमा धेरै भ्रष्टाचारका आरोपहरु रहका छन्। ब्ल्यू एन्ड ह्वाइट पार्टीका नेता बैनी गैन्ट्सले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छन् कि उनी नेतन्याहु जस्तो अनियमिततामा संलग्न भएको व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार गर्ने छैनन्। यदि यो वचनबाट उनी पछाडि हटेनन् भने कि त लिकुड पार्टीले आफ्नो नेता परिर्वतन गर्नुपर्ने छ नत्र सरकारबाहिर नै बस्नुपर्नेछ। यदि यो विकल्पमा गयो भने के नेतन्याहुको पार्टीका सांसदहरु यस्तो अवस्थामा उनको साथ दिन तयार हुनेछन्?
यसरी ठूला पार्टीहरु एकापसमा सरकार निर्माण गर्ने रस्साकस्सीमा भइरहँदा दोस्रो पटक भएको यो निर्वाचनले नयाँ समूह खडा गरेको छ।
अरब आवादीद्वारा समर्थन गरिएको जोइन्ट युनिटी लिष्ट यो चुनावको सबैभन्दा ठूलो विजेता देखिएको छ। यसको तर्फबाट सांसदमा १२ सांसद सहभागी हुनेछन्। चुनाव आयोग स्रोतका अनुसार अप्रिल ९ को निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अरब मतदाताले मतदान गरेका छन्। उक्त क्षेत्रमा करिब १३ प्रतिशत भोट बढेको छ। आम रुपमा अरब पार्टीहरु कुनै पनि सरकारमा सहभागी हुँदैनन्। तर जोइन्ट युनिटीका नेता अयमान ओदेहले आफ्नो कुनै अडान नरहेको बताए।
यसरी स्पष्ट बहुमत कुनै पनि पार्टीले हासिल गर्न नसकेपछि अब सबैको नजर राष्ट्रपति रुबेन रिवलिनमाथि रहेको छ। तेस्रो असफल निर्वाचन गर्ने कि नयाँ सरकार गठनका लागि सबै विकल्पमा छलफल गर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको हातमा रहेको देखिन्छ।
राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार जोनाथन कम्मिग्सले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएपछि सबै दलबीच छलफल गरी सरकार गठनको विकल्प तयार हुने बताए। उनले अहिले निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको र अन्तिम परिणाम घोषणा भएपछि यसबारेमा काम हुने बताए। उनले राष्ट्रपति रिवलिनको पूरा प्रयास जनताको मतको ध्यानमा राख्दै सही निर्णय गर्ने पक्षमा हुने बताए। उनले राष्ट्रपति फेरि निर्वाचन हुने कुरा रोक्ने पक्षमा प्रयास गर्ने समेत बताएका छन्। (बिबिसी हिन्दीबाट)
वामदेव गाैतमकाे मनोनयनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, बुधबारलाई पेसी
बेलायतको ठूलो बैंक एचएसबिसीले अवैध रकम सार्न सहयोग गरेकाे ‘फीनसेन फाइल्स’को खुलासा बेलायतकै सबैभन्दा ठूलो बैंक एचएसबिसी अवैध रकम ओसारपसारमा संलग्न रहेको खुलासा भएको छ। बैंकहरुको शंकास्पद गतिविधिसम्बन्धी रिपोर्ट (सस्... सोमबार, असोज ५, २०७७
अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या २ लाखनजिक अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या २ लाखनजिक पुगेको छ। जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मृत्यु... सोमबार, असोज ५, २०७७